एस्पेरान्तो के हो - नेपाल एस्पेरान्तो संघ - Nepala Esperanto Asocio
एस्पेरान्तो के हो
ई. १८८७ को जुलाई २३ तारिखका दिन यस्तै अर्को भाषा एस्पेरान्तो (Esperanto) को जन्म भयो । यस दिन डा. एस्पेरान्तो (आशावादी) भन्ने उपनामले रुसी भाषाबाट "पहिलो पुस्तक" नामक एउटा सानो पुस्तक प्रकाशित भएको थियो, जसमा सिक्न अत्यन्तै सजिलो एउटा भाषा सम्बन्धी साधारण जानकारी दिइएको थियो । यसका लेखक डा. लाजारो लुदोभिक जामेनहोफ थिए, जसको जन्म ई. १८५९ को डिसेम्बर १५ का दिन तत्कालीन रुसी प्रान्त ब्यालिस्तोक (हाल पोल्याण्ड) मा भएको थियो । त्यो प्रान्तमा राजनैतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा विभिन्न देशका बासिन्दाहरू आएर बसेका थिए । तिनीहरूमा भाषिक असमानता रहेकोले एक आपसमा शत्रुता रहिरहन्थ्यो । यो परिस्थितिले बालक जामेनहोफलाई निकै प्रभावित गर्‍यो । यसैको फलस्वरुप उनले अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको प्रारूप ई. १८७८ भित्र तयार पारे तर ऊ विदेशमा पढ्न जाँदा उनका बुबाले यसलाई वाहियात भनेर जलाइदिए । जामेनहोफ मस्को र वार्सामा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न गए र ई. १८७९ देखि १८८५ भित्र डाक्टरको उपाधि हासिल गरे । आँखाको चिकित्सक भएपछि आफ्नो लक्ष्यमा उनले पुनः कलम बढाए र ६ वर्षको अविरल खोज कार्य र अथक परिश्रमको फलस्वरुप उनले कल्पना गरेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको पूर्णरूप तयार भयो । उनले आफ्नो पुस्तक छपाउनका लागि कैयन् ठाउँमा प्रयास गरे तर कसैले छापिदिन मानेन । यसैताका उनले क्लारा जिल्वेर्निकसँग विवाह गरे । तिनैका बुबाको आर्थिक सहयोग पाएर उनी पहिलो पुस्तक प्रकाशित गर्न सफल भए । त्यसपछि विभिन्न देशबाट निस्किने गरेका एस्पेरान्तो पत्रिकाहरूले यस भाषालाई सुदृढ पार्नमा मद्दत पुर्‍यायो । यहाँ उनले आफ्ना हितैषी एन्थोनी ग्रोबोस्कीका सल्लाह र नर्वेका जोन्सनको चिन्हको पनि प्रयोग गरेका थिए । पाँचकुने हरियो तारालाई यस भाषाको प्रतीक चिन्हको रूपमा लिइन्छ । यसको हरियो रङ्ग आशाको प्रतीक हो र ताराको पाँचकुनाले पाँच महाद्वीपको प्रतिनिधित्व गर्दछ र यो आशा लिइन्छ कि यस नयाँ भाषाले सबैलाई एकीकरण गर्ने छ ।